သင်၏ Analytics သည်အမှတ်အသားကင်းမဲ့နေသည် Martech Zone
သင်၏ Analytics သည်အမှတ်အသားကင်းမဲ့နေသည်
စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 6, 2010 ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 Douglas Karr
သောကြာနေ့မှာငါစကားပြောခဲ့တယ် eduDEVAnalytics ၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်။ တက္ကသိုလ်ပညာတတ်များနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနများ၏ကွန်ဖရ။ ပရိသတ်တော်တော်များများက Google Analytics ကိုသုံးကြပါတယ်။ Google Analytics နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ပျင်းစရာကောင်းတဲ့တင်ဆက်မှုတစ်ခုလုပ်မယ့်အစားပရိသတ်ကိုသူတို့ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုပေးချင်ခဲ့တယ် analytics အပလီကေးရှင်းများပျောက်ဆုံးနေသည်။
ငါ၌ဖော်ပြထားသောလုပ်သောကိရိယာများ Analytics မှတင်ပြချက်:
Google Analytics URL Builder - Google Analytics အတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး querystring ကိုထုတ်လုပ်ရန်ရိုးရိုးကိရိယာတစ်ခု။
Google Search ကို Console နှင့် Bing ဝက်ဘ်မာစတာကိရိယာများ.
အာဏာပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းများ ဂူဂဲလ်နှင့် Bing / Yahoo ရှိသင်၏ဒိုမိန်းတွင်သော့ချက်စာလုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်!
SEOmoz သင်၏ SEO တိုးတက်မှုအားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ခြေရာခံရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုနှင့်သူတို့၏ PRO toolset များကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။
နေရာများ google ဂူးဂဲလ်၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်သင်၏တည်နေရာအခြေပြုစီးပွားရေးကိုထည့်ပေါင်းရန်၊ တည်းဖြတ်ရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်။ Bing မှ နှင့် Yahoo က! ဒါ့အပြင်သူတို့ကိုလည်းရှိသည်။
Bit.ly URL ခြေရာခံခြင်း။ Pro account တစ်ခုအတွက် sign up လုပ်ပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင် shortened domain ကိုသုံးပါ။ သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကသင့်အားမည်သည့်အတိုကောက် URL ကိုမဆို ဖြတ်၍ သွားလာရန်ခွင့်ပြုသည်
Sysomos, Radian ၆, lithium (ယခင်။ ScoutLabs), အမှတ်တရ, Google ကသတိပေးချက်, Tinker၊ Tweetbeep၊ backtweets, တေးရေး နှင့် တောင်ကြီးမြို့ အားလုံးသည်မတူညီသောလူမှုရေးနှင့်ဂုဏ်သတင်းစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။
Klout - လူမှုရေးအာကာသအတွင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အခွင့်အာဏာကိုတိုင်းတာ။
FeedPress - RSS feeds အတွက်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း။
Google ကခေတ်ရေစီးကြောင်း နှင့် Search for Google Insights.
Fireside ငါတို့ခံယူထားသောခိုင်ခံ့သော Podcasting ပလက်ဖောင်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Podcast တခုကို ကြံ့ခိုင်နားထောင်ခြင်းမက်ထရစ်နှင့်အတူ။
Vimeo နှင့် Youtube ကို နှစ် ဦး စလုံးကြံ့ခိုင်ကမ်းလှမ်း analytics သင့်ရဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးပေါ်မှာ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်များ မိုဘိုင်း Analytics မှ, webtrends Facebook မှာ Analytics မှ, webtrends Data ည့်သည်အချက်အလက် Mart နှင့် Webtrends ပိုကောင်းအောင်.
ငါဖော်ပြသင့်တယ်ဆိုပါစို့ Slideshare အဖြစ်ကောင်းစွာ! Slideshare ကသင်၏တင်ဆက်မှုများကိုအွန်လိုင်းတွင်မည်သို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေသည်စသည်တို့ကိုဖော်ပြသည်။
Tags: analyticsသရုပ်ခွဲတင်ဆက်မှုအာဏာပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းများedudevanalytics googleပြောရမှာPowerPoint